ဘောလုံးစက်ဘီးဘဲလ် နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ ဘောလုံးစက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. တကကောင်းစွာပညာတတ်များနှင့်ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ပေးထားသောနည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအရာတွေရှိပါတယ်တဲ့ professional စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အလွန်တင်းကြပ်စွာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်နှင့်အဆင့်မြင့်စက်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာစစ်ဆေးခြင်းကိုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့၏စီးရီးထောက်ပံ့တဲ့ professional ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းင် ဘောလုံးစက်ဘီးဘဲလ်.
ပုံစံ - JH-301/JH-302/JH-309
Fancy ဘေ့စ်ဘော-စတိုင်အမြင်-ထူးခြား။ အံ့မခန်းဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်လူတစ် ဦး စီအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/football-bike-bell.html
အကောင်းဆုံး ဘောလုံးစက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် ဘောလုံးစက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
အားလုံးသောမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား:၄၂ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1 pc/သတျတော,100 PCs/ctn,cuft:ဆး.ဒဗလျူ.:12 KGS G.ဒဗလျူ.:၁၄ ကီလိုဂရမ် အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော&အလွန့်အလွန်အလားအလာ–ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြက်ဆင်နှင့်အတူအဖြူရောင်အဖုံး-ပုံသဏ္ာန်စာနယ်ဇင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်း၏ဥပမာတစ်ခုရှိသည်“ကံကောင်းပါစေ”. အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်.လက်ရာမြောက်သော&တာရှည်ခံသည်-ဂန္ထဝင်လူမီနီယံခေါင်းလောင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုသံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုတာရှည်ခံ။ လှပစေသည် အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်
အရောင် Ringer စက်ဘီးဘဲလ်
ပစ္စည်း:ပလပ်စတစ်အောက်ခံနှင့်လီဗာ.အရွယ်အစား:၅၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1 pc/PE,10pc/box 200pcs/ctn.၁.၆ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၂ ကီလိုဂရမ် 22MM Pipe Handlebar အတွက်စက်ဘီး Ring Ring Accessory သတိပေးချက်ဘဲလ်:အလူမီနီယံစက်ဘီးလက်စွပ်ခေါင်းလောင်းကိုလုံခြုံရေးသတိပေးခေါင်းလောင်းအဖြစ်တောင်တက်စက်ဘီးများနှင့်လမ်းဘီးများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်. တာရှည်ခံအသုံးပြုမှုအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများ:စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအလူမီနီယမ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည် တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်:စက်ဘီးများအတွက်လက်ကိုင်ပြွန်အပြင်ဘက်အချင်းသည် ၂၂ မီလီမီတာရှိသည်.ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ဝက်အူလှည့်ကိုလက်ကိုင်ဘားတွင်ဝက်အူကိုတင်းကျပ်လိုက်ပါ. CRISP တီးမှုတ်သံကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာနားထောင်ပါ:ဖက်ရှင်အမြင်နှင့်အတူအလူမီနီယံစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံမြည်သံကိုအမြဲပေးသည်
ITEM:ငါ့စက်ဘီးဘဲလ်ကိုငါချစ်တယ်ပစ္စည်း:ပလပ်စတစ်အောက်ခံနှင့်လီဗာ.အရွယ်အစား:၅၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1 pc/PE,10pc/box 200pcs/ctn.၁.၆ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၂ ကီလိုဂရမ် စက်ဘီးလက်စွပ်ဘဲလ်သံအသစ် Safe I Love My Bike Printed Sound ချစ်စရာစက်ဘီးဟွန်းသတိပေးလက်စွပ် Bell စက်ဘီးဆက်စပ်ပစ္စည်း 22MM ပိုက်လက်ကိုင် သတိပေးချက်ဘဲလ်:အလူမီနီယံစက်ဘီးလက်စွပ်ခေါင်းလောင်းကိုလုံခြုံရေးသတိပေးခေါင်းလောင်းအဖြစ်တောင်တက်စက်ဘီးများနှင့်လမ်းဘီးများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်. တာရှည်ခံအသုံးပြုမှုအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများ:စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအလူမီနီယမ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည် တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်:စက်ဘီးများအတွက်လက်ကိုင်ပြွန်အပြင်ဘက်အချင်းသည် ၂၂ မီလီမီတာရှိသည်.ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ဝက်အူလှည့်ကိုလက်ကိုင်ဘားတွင်ဝက်အူကိုတင်းကျပ်လိုက်ပါ. CRISP တီးမှုတ်သံကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာနားထောင်ပါ:ဖက်ရှင်အမြင်နှင့်အတူအလူမီနီယံစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံမြည်သံကိုအမြဲပေးသည်